SHIRKII GUDIDA FULINTA EE XISBIGA ESPDP OO LAGU WADO IN UU QABSAMO 48 SAACADOOD EE SOO SOCDA | shiniilenews.com
Saturday, August 30th, 2014 | Posted by siti
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Sabtida galinka dambe ama Axada u qabsoomo shirkii gudida fulinta ee Ismaamulka Soomaalida. Waxaa suurtagal in shirku uu jiitamo Isniinita soo socota.
Madaxweynaha DDSI, Cabdi Cumar, ayaa ajandihii shirka u qaybiyey xubnaha gudida fulinta si ay shirka ka hor u sii dhuuxaan waxyaabaha laga doodayo. Madaxa kililka ayaa lagu wada in uu diirada saaro waxqabadka xukuumadiisa islamarkaana oo iska diifaaci doono dhaliilaha loo soo jeediyo habka uu u maamulay gobolka intii uu talada hayey.
Xubnaha ka soo horjeeda madaxweynaha ayaa dhankooda iyaguna soo bandhigi doono eedeymo iyo dhaliilo ay u qabaan xukuumada.
Wararka aan ka heleyno caasimada DDSI, Jigjjiga, ayaa sheegaya in ay wali gudida u qaybsan tahay 3 xubnood oo taageeraya madaxweynaha iyo 7 lid ku ah. Gudida ayaa lagu wada in doodaha kadib ay u codeyso in ay taageerto dooda madaxweynaha ama ta colka ka soo horjeeda.
Cabdi Cumar ayaa ku doodaya in uu nabadgalayada dalka wax weyn ka qabtay islamarkaana xukuumadiisu hirgalisay mashaariic tiro badan oo dadka waxtar u leh. Waxaa kale oo dooda madaxweynaha ka mid ah in kooxda lidka ku ahi ay gacan-saar la leeyihiin kooxaha nabadiidka ah, gaar ahaan ONLF iyo Alshabaab.
Xubnaha gudida fulinta ee ka soo horjeeda madaxweynaha ayaa ku dhaliilay in uu talada dalka maroorsaday, hantida ummada oo uu ku tagrifalay, qabyaalad qaawan, af-xumo loo geystay masuuliyiin dawlada ah iyo xubno qurba-joog ah oo aan kamid ahayn xukuumada oo uu siiyey awoodo balaadhan oo aan sharci ahayn.
Madaxweyne Cabdi Cumar oo lagu tilmaamo madaxii ugu awooda badnaa ee soo mara DDSI ayaa u muuqda in uu wajahay cadaadiskii siyasadeed ee ugu cusla intii uu xilka hayey. Lama hubo in uu ka badbaadi culayska siyaasadeed iyo inkale, balse waxaa xqiiq ah in khilaafkani uu yahay dakhar weyn oo soo gaadhay awooda hogaamintiisa.
Waxaa la filaya in xubno ka socda dawlada dhaxe ay soo gaadhaan Jigjjiga si ay goob-joog uga noqdaan shirka gudiga fulinta.